Phobia ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အင်္ဂလိပ်လို အကြောက်တရားကို ဖော်ညွှန်းရာမှာ အသုံးပြု ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အကြောင်း မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ မဆီမဆိုင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုရင် ပိုပြီး မှန်မယ် ထင်ပါတယ်။
အခု မောင်လူအေး ပြောမဲ့ Phobia က အယင်ရှိပြီးသား တွေထဲ မပါသေးတဲ့ Phobia တစ်ခုပါ။ Meeting-Phobia လို့ ခေါ်ရင် ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး တက်ရမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းပေါ့။ အစည်းအဝေး တက်ရမှာ ကြောက်တဲ့ အဆင့်တွေ အစားစား ရှိတယ်။ အချို့က အစည်းအဝေးဆို တက်ကို မတက်ချင်တာ။ နောက်တစ်မျိုးက တက်တော့ တက်တယ်။ တက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ပါဝင် ဆွေးနွေး ရမှာကို ကြောက်တာ။
မောင်လူအေး အယင်ပို့စ် တစ်ခုမှာ ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင် စ၀င်တော့ ရန်ကုန်က ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာစီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းမှာ။ စစချင်း ၀င်ရတော့ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Supervisor ရာထူးနဲ့ ၀င်ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက အကြီးစား မဟုတ်လှပေမဲ့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု တော်တော်လေး များတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် စ၀င်တော့ ကျောင်းပြီးစ ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ Drawing ကြည့်ရတာက အစ တော်တော်လေး အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတယ်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းကို တည်ဆောက်တဲ့ ပိုင်ရှင်ရော လာဆောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီသည်လည်း စင်္ကာပူ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ကြတော့ကာ အစစ အရာရာကို စင်္ကာပူ စံနှုံး၊ အခေါ်အဝေါ် အတိုင်း လုပ်ပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံသော ပြင်ပ ဆောက်လုပ်ရေးတွေမှာ မကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရပါတယ်။ ပညာတော်တော်လေး ရတယ်ပြောလို့ ရပါတယ်။ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ တော်တော်များများကလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ သုံးတဲ့ စနစ်တွေ အတိုင်း သုံးတဲ့ခါကျတော့ နောက်ပိုင်း စင်္ကာပူ ရောက်လာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တော်တော်လေးကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
ဥပမာ တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် ပြင်ပက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လက်မ၊ ပေနဲ့ တိုင်းထွာတွက်ချက် ကြတာ များပြီး ပန်းလှိုင်မှာတော့ မီလီမီတာနဲ့ သုံးပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးခလုတ် တစ်ခုထိုင်တဲ့ အမြင့်ကို ပြင်ပ ဆိုက်တွေက Power Point ဆိုရင် တစ်ပေ၊ Lighting ဆိုရင် လေးပေ (သို့မဟုတ်) သုံးပေခွဲလို့ ပြောဆို သုံးနှုံး တတ်ကြပေမဲ့ ပန်းလှိုင်မှာ Power ဆိုရင် သုံးရာ၊ Lighting ဆိုရင် ထောင့်လေးရာ လို့ မီလီမီတာနဲ့ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံး ပါတယ်။
အင်း ပြောချင်တာ လေရှည်နေတာနဲ့ လိုရင်းကို မရောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြောချင်တာက Meeting-Phobia အကြောင်း။ ကဲ စကားကို လိုရင်းဘက် ပြန်လှည့်ကြတာပေါ့။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အပတ်စဉ် Meeting တွေ တက်ကြရပါတယ်။ ပြောဆို ညှိနှိုင်း ကြရပါတယ်။ မောင်လူအေးက Supervisor ရာထူးမို့လို့ တကယ်တမ်း Meeting တက်စရာ မလိုပါဘူး။ မောင်လူအေး အထက်က Site Engineer တွေ တက်ကြ ရပါတယ်။ သူတို့ သွားတက်လို့ ရလာတဲ့ တစ်ပတ်စာ မပြီးမနေရ အလုပ်တွေ ပေါ်လာတဲ့ အခါကျမှသာ မောင်လူအေးတို့က သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားတွေကို လုပ်ကွက် ဝေမျှပြီး လုပ်ငန်း လျာထားချက် ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက် ကြရတာ။
တစ်ခါမှာကျတော့ မောင်လူအေးရဲ့ အထက်က လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေး Site Engineer က အစာအိမ် ရောဂါကြောင့် ဆရာဝန်က အနားယူရမယ် ဆိုတာနဲ့ တစ်လတိတိ အနားယူရပါတယ်။ တကယ်တော့ မောင်လူအေး အထက်မှာ Engineer နှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်က Mechanical အပိုင်းကို တာဝန်ယူရတဲ့ Engineer ပါ။ တကယ်တမ်း သူသည်ပင်လျှင် Site ရဲ့ Cheif Engineer လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူတစ်ဦးတည်း လည်းပဲ Site တစ်ခုလုံး တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်နိုင်သူ တစ်ဦးပါ။
လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Site Engineer အနားယူသွားတဲ့ ပထမ တစ်ပတ်ကတော့ မောင်လူအေး အလှည့်မကျ သေးပါဘူး။ ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ်ကျတော့ CE က ခေါ်ပါတယ်။ မောင်လူအေး ခင်ဗျားလည်း အတွေ့အကြုံ ရတာပေါ့ဗျာ။ လိုက်ခဲ့ပါ။ လိုက်တက်ပါပေါ့။ ဆိုတော့ မောင်လူအေးက ငြင်းတယ်။ ဟာ ဖြစ်မယ် မထင်ဘူးနော်ပေါ့။ ကျွန်တော် Site အကြောင်း ဘာမှသိတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဟိုက မေးလို့ ကျွန်တော် မဖြေနိုင်ရင် ဒုက္ခရောက်နေမယ် ဆိုပြီး ငြင်းပါတယ်။ ဆရာသမားက လက်မခံပါဘူး။ လိုက်ခဲ့ဖို့ အတင်း ခေါ်တာနဲ့ပဲ မောင်လူအေးလည်း မငြင်းသာဘဲ သူခေါ်ရာ လိုက်ပါ တက်ရောက် ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်က ပန်းလှိုင်ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီရဲ့ အင်ဂျင်နီယာချုပ် က တော်တော်လေး နာမည် ကြီးပါတယ်။ အရမ်းရစ်တယ်ပေါ့။ သူမေးတာ မဖြေနိုင်ဘဲ ယောင်နနလုပ်ရင် အော်တယ် ငေါက်တယ် ဆိုတာနဲ့ နာမည်က တော်တော်လေး လန့်ကြပါတယ်။ Site ထဲ သူလာပြီဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ Site တွေထဲက Engineer တွေဆိုတာ ပျာပျာသလဲ ဖြစ်ကြတဲ့ အထိ သူ့ကို လန့်ကြတယ်။ လန့်ဆို အလုပ်ပြီးမြောက်မှု တင်ပြပြီး ပိုက်ဆံ တောင်းတဲ့ အခါ သူ့လက်မှတ် မပါရင် ပိုက်ဆံ ထုတ်လို့ မရတဲ့အတွက်လည်း ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းကြရတာလည်း ပါတယ်။
Meeting တက်ရမဲ့ အချိန်ရောက်တော့ Meeting ခန်းထဲ ၀င်ထိုင် လိုက်ကြတယ် ဆိုရင်ပဲ မောင်လူအေး အခန်းကို တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ Meeting လာတက်သူတွေ အားလုံးက အနည်းလေး အသက်သုံးဆယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေ။ အချို့ အချို့တွေဆို အသက် လေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေ။ စပြီဆိုတာနဲ့ အယင်တစ်ပတ်က ပြောဆို ညှိနှိုင်း ခဲ့ကြတာ တွေကို Meeting Minute ထုတ်ထားပါတယ်။ တစ်ယောက် တစ်ရွက်စီဝေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုချင်းစီ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု၊ နောက်တစ်ပတ် အတွက် မှန်းထားတဲ့ လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်မှုတွေ မေးတယ်။ မှတ်ချက် ပေးတယ်။ တကယ်လို့ ပန်းလှိုင်က ပံ့ပိုးပေးမှု လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း အင်ဂျင်နီယာချုပ်က ညှိနှိုင်းပေးတယ်။
နာမည်ကြီးတဲ့ အတိုင်းပဲ အော်ပါတယ်။ ငေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသားလွတ် ဆူငေါက်နေတာ မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရမဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ပြီးသင့်လျက်နဲ့ နှောင့်နှေး ကြံ့ကြာနေတာ မျိုးတွေ တွေ့ရင် မညှာပါဘူး။ ဆူပါတယ်။
မောင်လူအေးတို့ ကုမ္ပဏီ အလှည့်ကျတော့ စစချင်း Mechanical ကိစ္စရပ်တွေ အတွက် မောင်လူအေးတို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကို မေးပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါတယ်။ Mechanical ကိစ္စရပ်အတွက် မေးပြီးတော့ Electrical ကိစ္စမေးမယ် ဆိုတော့ မောင်လူအေးရဲ့ အင်ဂျင်နီယာချုပ်က မောင်လူအေးကို ညွှန်ပြပြီး Electrical အတွက် Engineer ပါပါတယ်။ သူ့ကို မေးပါတဲ့။ ဟ ငါ့ဆရာကတော့ ပို့ပြီပေါ့။ အင်ဂျင်နီယာချုပ်က နောက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားက ဒီထဲမှာ ၀ါအရင့်ဆုံးပဲတဲ့။ (အမှန်က ချွန်တာပါ။) ခင်ဗျား ဆိုက်အကြောင်း ခင်ဗျား သိတယ်နော်တဲ့။ မောင်လူအေးလည်း ကျွန်တော် သိသလောက် ဖြေမယ်ပေါ့။ မေးပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ အားလုံးက သူမေးသမျှ မောင်လူအေး ဖြေနိုင်တယ်။ တိကျတဲ့ ခန့်မှန်းပြီးရမဲ့ ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတော့ ပထမဆုံး တက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Meeting ဟာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်။
အဓိက ပြောချင်တာက အထက် ရာထူးတွေမှာ ရှိကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ယုံကြည်မှု ပေးပြီး ဆက်ဆံတာ ခံရတော့ တကယ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် တက်လာရတယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်း မောင်လူအေး ပန်းလှိုင်ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ကနေ ထွက်ပြီး အပြင်မှာ ကန်ထရိုက်လိုက် လုပ်တယ်။ ဆပ်ကန်ထရိုက် ခေါ်တယ်ပေါ့။ ဦးဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Meeting တာထွက်မှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ ခဲ့တာကြောင့် နောက်ပိုင်း တက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အကြောက်အရွံ့မရှိ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာ မောင်လူအေး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်နေရာကနေ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတစ်ခါ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျတော့ ခုလူပြောများနေတဲ့ စကားရပ်လိုပဲ အဲဒီမှာ စတွေ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွင်း အပတ်စဉ် အစည်းအဝေးတွေမှာ စတင် တက်ရောက်ကြတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ စတင်ထိတွေ့ရတော့ မောင်လူအေး အယင်က တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Meeting တွေလိုပဲ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတိုင်း ဆွေးနွေးတိုင်းမှာ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာက အယင်နဲ့ မတူပါဘူး။ ယခင် တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Meeting များမှာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ကွာဟသည် ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်း တာဝန်ယူမှုချင်း ကွာဟသည် ဖြစ်စေ၊ တက်ရောက်သူ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိကြတယ်။ တင်ပြလာတဲ့ အကြောင်းအချက်များ အပေါ်မှာ အလေးဂရုပြု ဆွေးနွေးပေးကြတယ်။ အခု မောင်လူအေး ကြုံရတဲ့ Meeting က အဲလို မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Meeting စတင်တယ် ဆိုတာနဲ့ Meeting Organizer သည် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်နေမယ်။ တစ်ဦးချင်း တစ်ဌာနချင်း စီရဲ့ များသောအားဖြင့် ကောင်းကွက်ထက် ဆိုးကွက်တွေကို စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ ရေးမှတ် ထားရှိမယ်။ တစ်ဌာနချင်း တစ်ဌာနချင်းစီရဲ့ ပြဿနာတွေ အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးမှုတွေက အပြုသဘော မဆောင်တဲ့ အပြင်၊ ချိုးဖဲ့ နှိပ်ကွပ်မှု ပြုမှ ရမယ်ဆိုတဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံနဲ့ ချဉ်းကပ်တာ တွေ့ရတယ်။
အထူးသဖြင့် မောင်လူအေး တာဝန်ယူရတဲ့ ဌာနသည် ၀န်ဆောင်မှု ပေးရာ ဌာနဖြစ်လေတော့ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ ပြဿနာတွေ အစဉ်သဖြင့် ရှိနေတတ်တယ်။ ပြဿနာကို အပြုသဘောဆောင် ချဉ်းကပ်မှု အားနည်းတဲ့ အတွက် ပြဿနာရဲ့ အဖြေကို ရှာမှုထက် ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပဲ တစ်သမတ်တည်း ထိုးစစ်ဆင် ဖိအားပေး ဆွေးနွေးတဲ့အခါ အစည်းအဝေး တစ်ခုဟာ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေရှာရာ နေရာတစ်ခု မဟုတ်တော့ဘဲ မိမိရဲ့ အားနည်းချက်ကို အထက် လူကြီးတစ်ဦးက လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်နှိပ်ကွပ်ရာ နေရာ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဆိုတော့ကာ နောက်ပိုင်းမှာ အစည်းအဝေး ၀င်ရတိုင်းမှာ မိမိရဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းကို တင်ပြပြောဆိုမှု အလျဉ်းမရှိတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို ဖော်ဆောင်မှု အလွန်အမင်း အားနည်း ယုတ်လျော့သွားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ရမှာ ကြောက်စိတ် ၀င်လာတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ တက်ရောက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားကလွဲရင် ဘာ အကြံပြုချက်မှလည်း ထွက်မလာတော့ သလို ဘာမှလည်း ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှု ရမလာတော့ဘူး။
အဲ… မောင်လူအေး စင်္ကာပူရောက်လို့ အလုပ်လည်း လုပ်ရော… အဲဒီ အယင်က နှစ်နှစ်နီးနီး လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်ဆိုးက တွဲလျက်ကို ပါလာတယ်။ Meeting တက်ပြီဆိုရင် ကိုက ဆွေးနွေးဖို့ နေနေသာသာ ငါ့အမှားကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ထောက်ပြီး ဘာများ အပုပ်ချ လိုက်လေမလဲဆိုတဲ့ စိုးရွံ့စိတ်။ အဲဒီစိတ်က တော်တော်ကို ဒုက္ခပေးတယ်ဗျာ။ ပြောရမှာကို မပြောရဲ။ မေးရမှာကို မမေးရဲ။ ထောက်ပြရမှာကို မထောက်ပြရဲ။ လုပ်နေတဲ့ ပရောဂျက် လုပ်ငန်းနဲ့က အဲဒီလို မပြောရဲ မဆိုရဲနဲ့က မဖြစ်ဘူး။ ဆိုတော့ အယင် ပန်းလှိုင်က ရခဲ့တဲ့ ပြောရဲ ဆိုရဲ တင်ပြရဲတဲ့ စိတ် ပြန် မွေးရပါတယ်။ တကယ်တမ်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို၊ ပန်းလှိုင်က ပေးလိုက်တဲ့ ပညာတွေဟာ တော်တော်လေးကို အကျိုးပြုပါတယ်။ အစောဦးဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ကျေးဇူးလည်း မကင်းဘူးဆိုရမှာပေါ့။
ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် နေ့တိုင်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး လုပ်နေရတဲ့ Project လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အဲဒီ Meeting ကို ကြောက်ရွံ့တဲ့ စိတ်၊ မပြောရဲ မဆိုရဲတဲ့ စိတ် ကင်းမှသာလျှင် ဘယ် Meeting မှာ မဆို မိမိ လုပ်ဆောင်ရာ လုပ်ငန်းရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ သာလျှင် ဖြတ်ကျော် အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အထက် အထက်သော နေရာတွေမှာ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုသူများ အနေနဲ့လည်း လုပ်ငန်းတာဝန်ကို တကယ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နေကြသူတွေ အပေါ်မှာ နားလည်စာနာမှု အပြည့်နဲ့ တွဲခေါ် ဆောင်ရွက်မှသာ လုပ်ငန်းကို ဆထက်တပိုး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ Meeting - Phobia အကြောင်းလေး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
ဘလော်ဂါအပေါင်း သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းများနဲ့ လာရောက် ဖတ်ရှု ကြသူများလည်း Meeting - Phobia မှ ကင်းဝေး လွတ်မြောက်နိုင် ကြပြီး မိမိ ဆောင်ရွက်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း...
Filed Under : MEETING, Project Management, Singapore
October 27, 2008 at 2:13 AM
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းက အော်ငေါက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဆီကို ယခုwebsite ကို ပေးလိုက်မယ်။နောက်ကို အပြောအဆို ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့.....
my blog ... Indianadword.com
I am very glad to see such fantastic info being
Here is my weblog ... Www.Jiafenz.Com.tw
and i am looking forward to contact you. Will
Here is my web blog: frendzbook.com
My web page: ichantconsulting.com
my blog; camillacastro.cn
my website faceovl.com
Foreign Workers And Singapore
Regarding to Project Management
ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ တချို့ (၇)
Changing Of Holidays & DV2010